Sweety Home Company launches free to download Viber sticker pack to mark Thadingyut festival of Myanmar – LYCA COMMUNICATIONS
Sweety Home Company launches free to download Viber sticker pack to mark Thadingyut festival of Myanmar
Date: September 23, 2019Author: Rahul0Comments
“Viber users can start downloading from September 23 at Viber Sticker Market for Free”
Yangon – September 23, 2019 – Myanmar’s leading furniture manufacturing and distributing company, Sweety Home Company Limited, today released its second localised Viber sticker pack to mark the Thadingyut celebration, also known as the Lighting Festival of Myanmar.
As of September 23, the specially created Sweety Home sticker pack is available to download for free until December 23, 2019 only.
“Last year, we introduced our very first Free to Download Viber sticker pack for Myanmar Viber users and it was very well received and popular among Viber users in Myanmar. According to the data provided by Viber, number of people who downloaded our first sticker pack within three months reached to nearly one million Viber users. It is Free to Downloadand once you downloaded, you can use forever. So following the success of last year, today we launch our second Viber sticker pack to Myanmar Viber users,” said Daw Khin Thida Nwe, Senior Director from Sweety Home Company Limited.
This year, the sticker pack includes (24) distinctive stickers celebrating about the Thadingyut festival byacute and adorable couple as well as trendy Myanmar slang words that are popular among young people in Myanmar.
“This year Sweety Home Thadingyut sticker pack will available to download only until December 23. So download it now and create happy moments by sharing these fun and cute stickers with your friends, family and loved ones,” Daw Khin Thida Nwe said.
About Sweety Home Company Limited
Sweety Home Industry Company Limited, which established since 1995 is the professional manufacturing and distributing company of spring mattress, furniture and bedding accessories. Sweety Home is producing and distributing to all over Myanmar with its brands “Sweety Home”, “City Furniture” and “The Best”, applying the high technology and using premium quality raw materials. At present, it has (8) Living Malls in Yangon and Mandalay.
သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်အထိမ်းအမှတ် ချစ်စဖွယ် Viber စတစ်ကာကို Sweety Home မှ မိတ်ဆက်
“Sweety Home Viber စတစ်ကာများကို ယနေ့စက်တင်ဘာလ (၂၃)ရက်နေ့ မှ စတင်ကာViber Sticker Market မှ အခမဲ့ Download လုပ်ယူနိုင်ပါပြီ”
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၃)ရက်၊ ၂၀၁၉ခုနှစ် – ပြည်တွင်းမှ ထိပ်တန်းပရိဘောဂ ထုတ်လုပ် ရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည့် Sweety Home ကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် ယခုနှစ် သီတင်းကျွတ်မီးထွန်း ပွဲတော် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အထူးဖန်တီးထားသော ချစ်စဖွယ် Viber စတစ်ကာများကို ယနေ့ မှ စတင်ကာ အခမဲ့ Download ရယူကာ သုံးစွဲနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာလိုက်သည်။
မြန်မာ့ရိုးရာ သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲတော်နှင့် နေ့စဉ်ဘဝတွင် လူငယ်များအကြား အသုံးများသော ခေတ်စကား အသုံးအနှုန်းများဖြင့် အထူးဖော်ကြူးကာဖန်တီးထားသော ယင်း Viber စတစ်ကာများကို ယနေ့ စက်တင်ဘာလ(၂၃)နေ့ မှ ဒီဇင်ဘာလ(၂၃)နေ့အထိ Viber Sticker Market တွင် အခမဲ့ Download ရယူနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
“မနှစ်က Sweety Home Viber စတစ်ကာကိုလည်း အခုလိုပဲ အခမဲ့ Download သုံးလနဲ့ ပထမဆုံး အကြိမ်လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံး အကြိမ်လုပ်ပေမယ့် ကျွန်မတို့ Sweety Home Viber စတစ်ကာတွေဟာ အရမ်းကို ချစ်ဖို့ကောင်းပြီး ပွဲတော်ရာသီ၊ နေ့စဉ်ဘဝနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိတဲ့အတွက် မြန်မာViberသုံးစွဲသူများအကြား ရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်။ မနှစ်က စတစ်ကာကို သုံးလအတွင်း စုစုပေါင်း Download လုပ်တဲ့အကြိမ်အရေ တစ်သန်းနီးပါးအထိ ရှိခဲ့တာပါ။ တစ်ကြိမ် Download လုပ်ပြီးရင်လည်း တသက်လုံး ဆက်သုံးနေလို့ ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီနှစ်မှာလည်း မနှစ်ကထက် ပိုပြီးချစ်ဖို့ကောင်းအောင်၊ နောက်သုံးစွဲသူတွေအတွက် သူတို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝနဲ့ ဆက်စပ်ပြီးသုံးလို့ရမယ့် လူငယ်အကြိုက် ခေတ်ကာလ စကားအသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ ထပ်မံမိတ်ဆက် လိုက်ရတာပါ” ဟု Sweety Home ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ အကြီးတန်း ဒါရိုက်တာ ဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်သီတာနွယ်က ပြောကြားသည်။
သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်ကို ဖော်ကြူးသည့် စတစ်ကာများ၊ ချစ်စဖွယ်ချစ်သူစုံတွဲ၏ ချစ်စဖွယ် ဟန်ပန်၊ အမူအယာများဖြင့် စသဖြင့် စတစ်ကာပေါင်း(၂၄)ခုကို မြန်မာViber သုံးစွဲသူများအတွက်အထူး ရည်ရွယ်ပြီး Sweety Home ကုမ္ပဏီမိသားစုမှ အမှတ်တရလက်ဆောင်အဖြစ် ဒုတိယအကြိမ် မိတ်ဆက် ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် နေ့စဉ်ဘဝကိုဖော်ကြူးသည့် ခေတ်ကာလအသုံးအနှုန်းဖြင့် ဖန်တီးထားသော စတစ်ကာများ ဖြင့် မိသားစုဝင်များသာမက၊ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများနှင့် ချစ်ခင်ရသူများထံသို့လည်း အပြန်အလှန် ပေးပို့ ၍ ပျော်ရွှင်ဖွယ်အမှတ်တရ နေ့ရက်လေးများကို ဖန်းတီးနိုင်ပါသည်။
“ကျန်မတို့ Sweety Home ရဲ့ အခမဲ့ စတစ်ကာလေးတွေကို ဒီဇင်ဘာလ(၂၃)ရက်နေ့ အထိပဲ Viber Sticker Market မှာရှိမှာမို့ အခုပဲ Download လုပ်ယူပြီး ပျော်ရွှင်ဖွယ်နေ့ရက်လေးတွေကို ဖန်တီး လိုက်ပါ”ဟု ဒေါ်ခင်သီတာနွယ်က ပြောသည်။
Sweety Home ကုမ္ပဏီအကြောင်း။
Sweety Home Industry Company Limited ကို ၁၉၉၅ခုနှစ်ကတည်း စတင်ထူထောင်ခဲ့ပြီး စပရိန် မွေ့ယာ၊ ပရိဘောဂနှင့်အိမ်ခန်းသုံး ပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချပေးနေသော မြန်မာ ကုမ္ပဏီ ဖြစ်သည်။လက်ရှိ မန္တလေးမြို့ နှင့် ရန်ကုန်မြို့ တို့တွင် Living Mall (၈)ခုအပြင် ကိုယ်စားလှယ် ဆိုင်များမှတဆင့် တစ်နိုင်ငံလုံးကို အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများဖြင့် “Sweety Home”, “City Furniture” နှင့် “The Best” အမှတ်တံဆိပ်များဖြင့် အိမ်သုံး၊ ရုံးသုံးပရိဘောဂ ပစ္စည်းမျိုးစုံကို ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချပေးနေပါသည်။
FurnitureLycaLyca CommunicationsLyca Company LimitedMyanmarMyanmar PR AgencyPRPublic RelationsSweety HomeThadingyut FestivalViberViber Sticker PackYangon
Previous Previous post: DAWN Microfinance is teaming up with Software Group to accelerate financial inclusion in Myanmar
Next Next post: Ovaltine Myanmar to organize “Warm Family Bonding” Thadingyut campaign with grandeur